Ihe Ndị Ị Ga-eburu n’Uche Gbasara Siera Lion na Gini | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2014
Otú Ala Ha Dị Ma Siera Lion ma Gini nwere ụsọ oké osimiri, nweekwa ala dị larịị ha na-akọ nri na ha. Ha nwekwara nnukwu ugwu ndị mara mma. Osimiri atọ ndị e nwere n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Afrịka malitere n’obodo Gini. Osimiri ndị a bụ: Osimiri Gambịa, Osimiri Naịja na Osimiri Senigal.
Ndị Bi na Ha E nwere agbụrụ iri na asatọ na Siera Lion. Agbụrụ ndị Mende na ndị Temne kacha agbụrụ iri na isii ndị ọzọ. Ndị Krio so n’agbụrụ ndị e nwere na Siera Lion. Ha bụbu ndị ohu e si n’Afrịka buga mba ọzọ, e mechaa bughachi ha Afrịka. Ọtụtụ n’ime ha bi gburugburu Fritaụn. A bịa n’obodo Gini, e nwere ihe karịrị agbụrụ iri atọ. Ndị Fulani, ndị Mandingo na ndị Susu kacha agbụrụ ndị ọzọ. *
Okpukpe Ha E kee ndị Siera Lion ụzọ iri, ihe dị ka ụzọ isii bụ Ndị Alakụba, ebe ọtụtụ n’ime ụzọ anọ ndị fọrọ afọ bụ ndị sị na ha bụ Ndị Kraịst. Ihe dị ka mmadụ itoolu n’ime mmadụ iri ọ bụla bi na Gini bụ Ndị Alakụba. Ọtụtụ ndị Siera Lion na ndị Gini bụ ndị ọgọ mmụọ.
Asụsụ Ha Agbụrụ ọ bụla e nwere na Siera Lion nwere asụsụ nke ya. Asụsụ Krio bụ asụsụ agbụrụ ọ bụla ma asụ. E si n’asụsụ Bekee, asụsụ ndị Yurop na asụsụ ndị Afrịka nweta ya. Ndị Gini na-asụ French. Ihe dị ka mmadụ isii n’ime mmadụ iri ọ bụla bi na Siera Lion na Gini amaghị akwụkwọ.
Ihe Ha Na-arụ Ọtụtụ ndị Siera Lion bụ ndị ọrụ ugbo. E nwekwara dayamọnd na Siera Lion. Ihe dị ka ọkara ego gọọmenti na-enweta na-esi na dayamọnd ha na-ere ná mba ọzọ. Obodo Gini nwere ihe e ji emepụta alụminiọn. N’ụwa niile, Gini so ná ndị kacha nwee ihe e ji emepụta alụminiọn.
Nri Ha Nri a na-erikarị na Siera Lion na Gini bụ osikapa. Ọ bụ ya mere onye ọ bụla ji ekwukarị, sị: “M richaa ihe niile, ma mụ eribeghị osikapa, eribeghị m nri!” Ihe ọzọ ha na-eri bụ akpụ. A na-ejikarị anụ, ọkwụrụ na ofe ma ọ bụ stuu eri ha.
Otú Ebe Ndị ahụ Na-adị Obodo ndị dị n’ụsọ osimiri Siera Lion na Gini na-ekpo ọkụ. Obodo ndị dị n’elu ugwu na-ajụ oyi. N’oge ọkọchị, ụgụrụ na-efe ọtụtụ ụbọchị. Ikuku na-esikwa n’ọzara Sahara buru ájá na uzuzu kpuchie ebe niile.
^ para. 4 Ụfọdụ agbụrụ nwekwara ọtụtụ aha e ji mara ha.
OTÚ ALA HA HÀ (na kilomita)
MMADỤ OLE BI NA HA
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA N’AFỌ 2013
MMADỤ OLE OTU ONYE NKWUSA KETARA
NDỊ BỊARA NCHETA ỌNWỤ JIZỌS N’AFỌ 2013